Natao Hanasàna Atidoha Ny Ankizy Ao Hong Kong Ve Ilay Hira Manintona ‘Shina No Reniko’ ? · Global Voices teny Malagasy
Natao Hanasàna Atidoha Ny Ankizy Ao Hong Kong Ve Ilay Hira Manintona ‘Shina No Reniko’ ?
Voadika ny 13 Marsa 2015 4:12 GMT
Dikasary avy amin'ilay lahatsarin-kira ho an'ny ankizy “Shina No Reniko”.
China China is my mother
Shina Shina no reniko
Shina Shina no fireneko
miha-matanjaka i Shina
Shina Shina, tiako izy
Ity hira maharitra telo minitra natao ho an'ny ankizy ity, izay andalana efatra monja no averimberina ao, dia nampanahy ireo ray aman-dreny ao Hong Kong. Vao haingana izy io no indroa niseho nandritry ny fivoriambe iray fanao isan-kerinandron'ny sekoly fanabeazana fototra an'ny Katolika, ary ezaka fanasàna atidoha no nahitan'ireo ray aman-dreny sasany an'ilay hira manintona ao anatin'ny fotoana izay mampihenjana be ny fifandraisana eo amin'ny Hong Kong sy Shina.
Fari-pitantanana manokana ao Shina i Hong Kong fa nomen'ny tanibe fizakàn-tena avobe, saingy mametraka tsindry politika ambony be i Beijing mba hanerena an'i Hong Kong hanaraka ny soritra politika napetrany. Matetika no samihafa ny fijerin'ny governemantan'i Beijing sy Hong Kong momba ny amin'ilay tanàna, tsy toy izay irian'ireo teratany avy ao Hong Kong — araka ny nasehon'ireo hetsi-panoherana Bodoy ny Afovoany nataon'ireo mpomba ny demaokrasia nanerana ny afovoan-tanàna efa ho volana roa mahery.
Tamin'ny 2012, notoherin'ny governemantan'i Hong Kong ireo drafitra hametrahana “fanabeazana tia tanindrazana”, na ilay antsoina hoe “fanabeazam-pirenena” izay manandratra an'i Shina, ampahany amin'ny fandaharam-pianarana tsy maintsy arahana ho an'ny fanabeazana fototra noho ireo andianà hetsi-panoherana. Kanefa, tohizan'ny Biraon'ny Fanabeazana ao Hong Kong ny fandrisihana ilay fandaharanasam-panabeazana amin'ny alàlan'ny famatsiana vola ilay tetikasa, ary marobe ireo sekoly no efa nampiditra amin'ny fomba ofisialy ilay fandaharam-pianarana ho toy ny asa fanampiny ivelan'ny fianarana.
Taorian'ilay fitorevahana Bodoy ny Afovoany, nanentana an'i Hong Kong i Beiing hamerina hametraka ilay fandaharam-pampianaran'ny firenena. Samy manara-maso ny fivoaran'ny toe-draharaha na ny ray aman-dreny na ireo mpikatroka mafàna fo.
Ny mpiandraikitra ny sekoly Katolika dia niaiky fa efa in-droa nandefa ilay lahatsarin-kira “Shina No Reniko” izy tao anatin'ny volana iray nandritra ireo fivoriamben'ny sekoly, tamin'ny nilazàny fa mifanaraka tsara tamin'ny fotokevitry ny fivoriambe ireo sary tao anatin'ilay hira miresaka “fanajàna fatratra” sy “kolontsaina”. Notsindriany fa tsy tao an-tsiny loatra ny tonon'ilay hira ary tsy nanaery ny ankizy hihira izany izy.
Miaraka amin'ireo andalana efatra averimberina tsy mitsahatra ao anatin'ilay hira, sarotra ny hino hoe tsy ho ao an-tsain'ny olona mandre azy ny zavatra lazain'ilay hira.
Nandrafitra taratasy iray ireo ray aman-dreny sasany avy ao amin'ny “Vondron'ireo Ray Aman-dreny Miasa Saina Amin'ny Fanabeazam-Pirenena” ao amin'ny Facebook, halefa ho an'ilay sekoly sy ny Fiangonana Katolika mikasika io olana io.
Mok Chi Wai, mpanoratra avy amin'ny sehatra fnaovana gazetin'olon-tsotra i”nmediahk.net”, dia nijery akaiky ny fifandraisana misy amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiangonana Katolika sy ny politikan'ny tanibe Shinoa:
Mitovy amin'ny tontolo politika ao Hong Kong ihany, manana tia tanindrazana maro ny fiangonana Katolika. Misy karazany roa reo tia tanindrazana: ireo demaokraty ary ireo mpomba ny kaominista. Mifikatra betsaka amin'ny maha-Shinoa azy ireo demaokraty ary mihevitra fa tokony hitia sy hahafantatra ny firneny ireo mpivavaka. Tokony hanohana ny fandrosoan'ny firenena ary manohana ny hetsika demaokratika. Ny sasany amin'izy ireo dia manakiana ny fifehezan'ny Antoko Kaominista Shinoa. […] Tian-dry zareo hapetraka ao anaty faritry ny “maoraly” ny fitiavana tanindrazana. Izany no anton'ny hoe “Shina no Reniko” ary zanany isika — fianakaviana atambatry ny rà iraisana io ary tokony hikarakara ny firenena miaraka amin'ny fotokevitry ny fanajàna fatratra isika. Manohitra ilay fotokevitra ny fametrahana fanontaniana momba ny “fitiavana tanindrazana” ary araka izany dia fitondrantena tsy mendrika. Na dia miantso ny tenany ho “tia tanindrazana manakiana” aza ry zareo, ankosotra iahny ny kiana ataony. Tohizan-dry zareo hatrany ny fanelezana ny “fitiavana tanindrazana” nefa tsy manontny velively izay antony. Fa inona marina amin'io firenena io moa no tena tiantsika?
Karazany iray hafa ireo tia tanindrazana mpomba ny Antoko Kaominista Shinoa. Tsy ny firenena fotsiny no tian-dry zareo fa ilay antoko koa. Mino an'i [Filoha] Xi Jinping ry zareo ary mihevitra fa ny kiana ataon'ireo tandrefana amin'i Shina dia resaka tombontsoa imerialista fotsiny.
ialàn'ny mpikambana sasany ao amin'ilay fiangonana ny resaka mikasika ny politika satria maniry ny hitory ny finoany any amin'ny tanibe Shina ry zareo, na hanohanana ny fifamatorana misy ao amin'i Shina sy Vatikana. Tso-po ny sasany amin-dry zareo ary mahatakatra ny vidin'ny fitazonana ny fahanginana. Aleon-dry zareo miondrika tsy mijery izany ka mifantoka fotsiny amin'ny fitoriana ny finoana amin'ny fo madio. Tsy manafintohina ny mpitondra ry zareo no sady tsy manakiana ireo mpanao hetsi-panoherana. Kanefa ny sasany amin'ìzy ireo no mirehareha amin'ny asa vitany ary mino fa tsara ny tetikady noraisiny. Kianin-dry zareo noho ireo tolona adaladala ataony ireo mpanao hetsi-panoherana ary inoan-dry zareo fa ny “politika” dia mety hanimba ny fahafahana mitory ny finoana Kristiana.
Koa satria miakatra ny tsindry hanaovana ilay fandaharam-pianaram-pirenena ho tsy maintsy arahana, dia hitombo ihany koa ny fisamahana sy ny fifandirana ao anatin'ny fiangonana. Tena afaka misaraka tanteraka tokoa va re ny politika sy ny fivavahana?